6da saacadood ee isboorti ee ugu fiican, midkee ayaad doorbideysaa? | Ragga Stylish
Ilaalada isboortiga ugu fiican
Jarmal Portillo | | Tiknoolaji
Haddii aad sameyneyso isboorti waxaad u baahan tahay qalab kaa caawinaya inaad tiriso kiiloomitirrada aad ordeyso, kalooriyada aad isticmaashid iyo taas oo u noqonaysa diiwaanka howlahaaga. Saacadaha isboortiga ayaa ah kuwa ugu fiican ee kormeera jimicsigaaga. Waxaa jira kumanaan nooc iyo moodooyin leh shaqooyin iyo astaamo kala duwan.
Qoraalkan waxaan ku soo qaadaneynaa qoraal kooban oo leh saacadaha isboortiga ugu fiican iyada oo dhammaan faa'iidooyinkeeda iyo khasaaraheeda iyo qiimaheeda. Ma rabtaa inaad ogaato saacadda adiga kuugu fiican?
1 Saacadaha isboortiga iyo shaqadooda
2 Saacadaha isboortiga ee loogu talo galay
2.1 Barta M200
2.2 TomTom orodyahan
2.4 Barta M400
Saacadaha isboortiga iyo shaqadooda
Markaad sameyneyso isboorti waxaa si weyn lagugula talinayaa inaad cabirto xuduudahaaga si aad uga guuleysato socodka. Tababbarka maalmo kadib, jirkaagu wuxuu kusii fiicnaanayaa heer joogto ah. Si loola socdo heerka garaaca wadnahaaga, masaafada safartay, kalooriyada gubatay, iwm. Waxaa jira daawashada cayaaraha. Intaas waxaa sii dheer, inbadan oo kamid ah saacadahan waxay leeyihiin howl GPS ah si loo xisaabiyo inta aad soo safartay intaad socotey, dabaasha ama baaskiil wadida
Haysashada qalabka garaaca wadnaha iyo GPS ee curcurkaaga waligiis ma fududaan. Waxaa jira malaayiin noocyo kala duwan oo suuqa yaal. Waxay kuxirantahay naqshadeynta, astaanta iyo waxqabadka, waxaan helnaa saacado kaladuwan oo leh tayo wanaagsan iyo sicirka qiimaha. Noocyada ugu caansan waxaan ka helnaa Garmin, Polar iyo TomTom.
Waa in la sheegaa kahor intaan la bilaabin falanqeyntooda mid mid, taas ma jiro wax saacad ah oo lagu ordo ama isboorti kale oo kan ugu fiican oo dhan. Sida had iyo jeer, halkan waxaan mudnaanta siinaynaa mid kasta baahidiisa. Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay halbeegga ugu adag ee lagu gaari karo qaabka ugu habboon ee mid walba taasna ay ku habboon tahay jeebkeenna. Waa macquul inaan isku aragno saacad wax qabadkeedu sarreeyo laakiin naqshad xun ama qiimo sare leh. Sidaa darteed, waxaa fiican in la falanqeeyo dhammaan kuwa suurtogalka ah ka hor inta aan mid la helin ka dibna la qoomamo.
Saacadaha isboortiga ee loogu talo galay
Laga bilaabo hadda, waxaan dooran doonnaa liistada saacadaha ugu fiican suuqa. Marka ugu fiican waxaan ula jeednaa faa'iidooyinka, qaabeynta iyo tayada / qiimaha saamiga. Sida had iyo jeer aan dhahno, qof walba waa ka duwan yahay saacaddaaduna inta badan waa la qabsan kartaa isaga baahidiisana waxaa laga yaabaa inaysan ku jirin liiskan.
Sidaas oo ay tahay, waxaan sii wadaynaa xusidda iyo falanqaynta kuwa ay aqbashay aqlabiyadda bahda isboortiga.
Waxaan ku bilaabaynaa liiskan GPS-ka saacadaha socda iyo heerka garaaca wadnaha. Qiimahaaga Amazon Waxay ku jirtaa 99,00 euro. Saacaddan ayaa ku habboon in laga bilaabo adduunka socodsiinta iyadoo gacanta lagu hayo GPS oo leh mitirka garaaca wadnaha. Sidan ayaad ku xakameyn kartaa garaacaaga oo aad u hagaajin kartaa kharashka kalooriga yoolka aad u baahan tahay.
Waxay kuxirantahay casriga si aad uga hesho ogeysiisyada barnaamijyada qaar. Qiimaheedu wuu ka hooseeyaa maxaa yeelay shaashadiisu ma taaban, laakiin waa e-khad madow iyo caddaan ah. Dareeraha garaaca wadnaha iyo GPS waa sax. Batariga ayaa leh muddo ah 6 maalmood haddii aan la isticmaalin iyo 6 saacadood haddii garaaca wadnaha iyo GPS la kormeerayo.
Saacaddan ayaa ku habboon orodka iyo dabaasha labadaba. Qiimahaaga gudaha Amazonwaa 89,90 euro. Waxaa loo yaqaan 'Rafaa' Dutch iyo isticmaalkiisu waa mid fudud. Shaashadiisu waxay le'eg tahay cabirkeedu yahay 1,37 inji. Waxay muujineysaa astaamaha xawaaraha, fogaanta iyo xawaaraha. Intaas waxaa sii dheer, haddii aan ku xirno kormeeraha wadnaha waxay awood u leedahay inay kormeerto waqtiga dhabta ah ee ka dhanka ah calaamadahaagii hore.
Nolosha batteriga ayaa xoogaa la dhaleeceeyay naqshaddeeduna way sii fiicnaan kartaa. Wuxuu ubaahanyahay inuu iswaafajiyo maalin kasta oo kale si saxsanaanta GPS loo ilaaliyo. Waxaa lagu liqi karaa ilaa 50 mitir oo biyo ah.
Waa saacad qiimo jaban oo qiima dhimis ku habboon loogu talagalay waxqabadyada sida baaskiil wadista iyo orodka. Waxaa loogu talagalay inay noqoto mid dhan-ka ah oo kaliya maahan saacad socota. GPS-ka la dhisay wuxuu naga caawinayaa inaan ogaano masaafada iyo xawaaraha aan ku soconno inta aan orodka ku jirno. Waxaan sidoo kale ogaan karnaa tirada talaabooyinka aan qaadnay iyo kalooriyada aan isticmaalnay.
Waxaa la geli karaa ilaa 50 mitir oo biyo ah. GPS firfircoon, baytarigu wuxuu socdaa 8 saacadood. Firfircoonida iyo habka kormeerka waxay socon kartaa illaa 5 toddobaad.
Saacaddani waxay leedahay dareeraha garaaca wadnaha ee H7. Way kufiican tahay orodka iyo baaskiil wadista. Waxay ka mid tahay saacadaha ugu wanaagsan ee isboorti maxaa yeelay waa ikhtiyaar dareemayaal aad u wanaagsan oo leh qiime la awoodi karo. Daaran Amazon qiimaheedu waa 125 euro.
Waxay qiyaasi kartaa joogga, masaafada aan soo marnay iyo waqtiga aan jimicsiga sameynay. Waxaa lagu liqi karaa ilaa 30 mitir oo biyo ah. Waad kormeeri kartaa howlaheena maalinta oo dhan, taas oo noo ogolaaneysa inaan ku qorsheyno tababarkeena barnaamijka. Tan macnaheedu waa taas Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa jijin jireed.
Naqshad kale oo ka timid nooca TomTom. Qiimahaaga gudahaAmazon waa 165 euro. Shaashadeeda 1,37-inch oo ay kujirto kormeeraha garaaca wadnaha ee indhaha oo si fiican u shaqeynaya ayaa ka dhigaya ikhtiyaar wanaagsan. Waad jadwal u sameyn kartaa jimicsiyada u dhexeeya si aad naftaada u horumariso. Waxaa la quusin karaa ilaa 50 mitir oo biyo ah.
Khasaaruhu waa in software-ka xogta ka soo ururinaya aaladda aan si wanaagsan loo horumarin.
Sida aad u aragto, seddexdaan magac waa kuwa ugu sarreeya saacadaha isboorti ee ugu fiican. Waa mid ka mid ah nashqadaha ugu casrisan suuqa. Shaashadeeda weyn ee 2,5-inji ah waxay ka dhigeysaa wax muuqda oo fudud in la maareeyo. Waa mid ka mid ah saacadaha kooban ee leh GPS iyo shaashad midab leh. Waxay leedahay heer-kulmeed iyo kormeeraha qiyaasta garaaca wadnaha.
Waxay la jaanqaadi kartaa Bluetooth-ka waxayna ku xirnaan kartaa taleefannada casriga ah ama dareemayaal kale oo dibedda ah sida kormeerayaasha garaaca wadnaha. Xogtaada waxaa loo geyn karaa aaladan si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyadeena ciyaaraha. Dhibaatada haysata ayaa ah in badanaa aan laga helin bakhaarro badan dalabkeeda awgeed.
Waxaan rajaynayaa ka dib markaan ku tuso saacadahan inaad go'aansan karto inaad aragto midka kuugu haboon adiga 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Ilaalada isboortiga ugu fiican
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kabaha Castilian
Waa maxay electrostimulation, sida ay u shaqeyso, khuraafaadka iyo runta